Gbasara Anyị | Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd.
Nraranye na imekọ ihe ọnụ, mụọ na-aga n'ihu. Ndị ọrụ ọ bụla na-anọchite anya ụlọ ọrụ ahụ.
Inye usoro ịkpụzi ihe kachasị baa uru na ngwọta kacha mma maka ndị ahịa, gafere atụmanya ndị ahịa, ịnweta ntụkwasị obi na nkwanye ugwu sitere na ndị mmekọ na ọha mmadụ.
Mepụta uru maka ndị ahịa. Innovation, Team na-arụ ọrụ, Na-ekwusi ike na eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe. Drivegbọala kacha mma.
Anyị ji nlezianya na-arụ ọrụ anyị, na-echekwa oke mma yana nrụpụta na-agbanwe agbanwe. anyị zụrụ igwe CNC dị elu na akụrụngwa nyocha iji hụ na ngwaahịa dị oke mma, site na ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ na ọzụzụ na-aga n'ihu iji melite ogo ndị ọrụ.
Talenti bụ isi ihe mmepe ụlọ ọrụ, asọmpi dị n'etiti ụlọ ọrụ bụ asọmpi talent na nyocha ikpeazụ. Ngwaọrụ Sofiq na-agbaso echiche mmadụ na usoro nduzi, site na iwebata na ọzụzụ talent iji wulite otu egwuregwu siri ike na asọmpi isi.
Nkedo Nkedo Flask, Sandbox, Punch Out igwe, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Flask akpụzi Machine, Flask Nkedo,